Published : April 26, 2012 | Author : कृष्णकला वनेम
Category : Memoir / संस्मरण | Views : 989 | Unrated
विश्वोमा गनिएको अत्यन्तै सुन्दर देशहरू मध्ये ईजरायल पनि एक हो । यही देशको एउटा अति रमणीय शहर तेलाभिबको समुद्रीक किनारामा म केही बर्ष यताबाट काम गर्दै आएकीछु । यो समुद्रको किनारामा हिउँदको तिन महिना बाहेक अन्य सबै महिनामा लाखौं मानिसहरू पौडी खेल्न, बालुवामा रम्न, रमाईलो खेल खेल्न छुट्टीको दिनमा मात्र नभएर चौबिसै घन्टा आउँने गर्छन । बिषेश गरेर यहाँ मायालु जोडीहरू धेरै आउँने गर्दछन्‌ । रंगीन झिलीमिली दिन हो की रात पत्तै नहुने । समुद्रको छालसंगै मिठो धुनमा सुसेली खेल्दै बहेको चिसो चिसो हावाको आनन्द लिदै हजारौ मायालु जोडीहरू हातमा हात मिलाएर, अङ्गालोमा बाँधीएर एकार्कामा शारिरिक न्यानो स्पर्सका साथमा चुम्बन गरेर हिडेको देख्छु । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
जब म यस्ता मायालु जोडीहरू कसैको वास्ता नगरी एकअर्का प्रेममा लिप्त भएको दृश्य देख्छु । तब मलाई कताकता म सानो छदाँ मैले झल्झली देखेको दृष्यहरू मेरा आँखा भरी नाच्न थाल्दछ । मानिसहरू भन्ने गर्छन्‌ सानो बालबच्चाको दिमागमा असर पुग्ने काम, नब्याहार, दृष्यहरू सुनाउनु देखाउनु हुन्न भनेर तर यो वास्तविकता रहेछ । किनकि आज म आफै त्यो महशुस गरी रहेकोछु । म चाहेर पनि यो कुरा भुल्न सकेको छुईन । जब मेरो आँखाले ति दृष्य देख्छ तब एकाएक त्यो बाल्य दिमागमा खिल झै गाडिएको कुराको स्मरणले मेरो मन दुखित बनाई दिन्छ । किनकि यो एउटा चोखो प्रेमको जिउँदो पिडा थियो ।
झापा जिल्लाको जलथल गा. बि. स. मा एउटा अत्यन्तै पुरानो पोखरी छ धनुषा । सोही पोखरीले गर्दा त्यो बस्तीको नाम, प्राथमिक बिध्यालयको नाम समेत धनुषा नामाकरण गरीएकोछ । त्यो स्कूलमा तीन क्लाससम्म पढाई हुन्थ्यो । मेरो बस्ती त हैन धनुषा तर पनि मेरो गाउँबाट नजिकै थियो । कुरा आज भन्दा बिस बर्ष अगाडिको हो । त्यो बेला म सानै थिए । बाबाले मलाई पनि त्यही स्कूलमा लगेर भर्ना गराई दिनुभयो । पहिला-पहिला त स्कूल जानु भने पछी खुट्टामा काँडा नै बिझे झै हुन्थ्यो । बाबाले गाली गर्दै स्कूल पुर्याउनु हुन्थ्यो । भरखर स्थापना भएको स्कूल हुनाले पिउँने पानीको त्यहाँ बन्दोबस्त थिएन । पानी पिउँनको लागि नजिकैको घरमा जानु पर्थ्यो । म दिउँसो टिफीन भएपछी दिनहुँ त्यही घरमा पानी पिउँन जान्थे । त्यो घरमा एक जना अत्यन्तै राम्री दिदी थिईन । एक दिन ती दिदीले मलाई सोधिन । नानु तिम्रो नाम के हो ?
मैले भने कृष्ण ।
तिमी कति क्लासमा पढ्छेउ त ?
अनि घर चाही कहाँ निर हो ?
माथि हो शम्भु चोकमा । अनि मैले पनि प्रश्न गरे,, दिदी तपाईको चाही के हो नाम ? कुन स्कूल पढ्नु हुन्छ ? तपाई कति राम्री है ?
अनि उन्ले मेरो गालामा सुम्सुम्याउदै भनिन् । मेरो नाम सानु हो, म कालीमन्दिर हाई स्कूलमा पढ्थे अहिले एस.एल.सी. दिएर बसेकीछु । ए तिमी शम्भु चोकबाट यहाँसम्म पढ्न आउँछौ । समिरलाई चिन्छौ तिमी कृष्ण ? चिन्छु सानु दिदी, मेरो घर र समिर दादाको घर अलि वरपर हो । मलाई समिर दादाले कति माया गर्नु हुन्छ । तपाई र समिर दादासंगै एउटै स्कूलमा पढ्नु हुन्छ हो ? सानुले भनिन् हो समिर र म पढ्ने स्कूल एउटै हो र हामी ज्यादै मिल्ने साथी पनि हौँ । यसरी नै म प्रत्येक दिन एक घन्टाको टिफीनमा पानी पिउन सानुको घर जाँदा उनिसँग गफ गरेर समय बिताउँथे । यो बाल मनस्थितीले भ्याएसम्म अनेकौं कुराहरू सोधेर सानुलाई वाक्क लगाउँथे । उन्को र मेरो दुरी निक्कै नजिक हुदै गयो । मलाई ज्यादै मन पराउँथिन र असाध्यै माया पनि गर्थिन । उनि त्यस्तै पन्द्र बर्षकी थिईन त्यो बेलामा । म स्कूल जाँदा फर्कदा जहिल्यै मसँग कुरा गर्थिन्‌ र घरमा जे छ चिउरा, भुजा, केरा, चाम्रे अत्यन्तै मायाका साथ खाजा खान दिन्थिन । अनि मेरो किताबमा एउटा पत्र च्यापेर सुटुक्कै यो कसैले थाहा नपाईकन समिरलाई दिनु है भनेर भन्ने गर्थिन । म त्यो पत्र लगेर कसैले थाहा नपाई समिरलाई दिन्थे अनि पत्र पाएको खुशीमा समिरले मलाई बोकेर गालामा चुम्मा गर्थ्यो । मलाई सहयोग गर्ने मेरो प्यारी बहिनी भन्दै । त्यसैगरी समिरको पत्र पनि म लगेर सानुलाई दिने गर्थे । तिन क्लास मैले पास गरे पछि मेरो त्यहाँको लागि स्कूल जान सकियो । यसरी मैले उनिहरूको पत्र लगभग तिन बर्षसम्म ओसार पसार गरे । अब भने सानुको र मेरो भेट पातलो मात्र हुन थाल्यो ।
सानुलाई अ?ले नै पालपोषण गरी हुर्काएका थिए । उन्लाई म को हुँ र के जातकी हुँ भनेर पनि थाहा थिएन । किनकि उस्लाई जन्माएर कसैले बाटोमा मिल्काएको अवस्थामा फेला पारेर ल्याएका थिए । तर उनीलाई एक शिक्षित परिवारले राम्रो शिक्षादिक्षा संस्कार दिएर हुर्काएका थिए । सानु अत्यन्तै राम्री थिईन, काली काली भए पनि हिस्सी परेकी, ठुल्ठुला आँखा, लामा कपाल दुई चुल्ठी बाटेर अगाडि लर्काउथिन । उनको शुन्दरतासंगै सहनशिल, कुशल मिठो बोली, ज्यादै राम्रो शिलस्वभाव थियो । सानुका एक भाई र बहिनी थिए । तिनै जनाले एस.एल.सी. परिक्षा दिएका थिए । भाइ र बहिनी पास भए तर सानु भने पास भईनन् । उन्ले तिन पटकसम्म परिक्षा दिदा पनि पास नभए पछी हार खाएर उन्ले पढ्नै छोडिन । उनी घरमै काम गरेर बस्थिन । गाउँघर हुनाले खेतबारीको काम, गाईबस्तु, बाख्रा, सुगुर, कुखुराको पालन गर्थिन् । उन्लाई अनाथ भनेर कहिल्यै बा, आमा, भाइ, बहिनीले हेला गर्दैनथे । आफ्नै घरको सन्तान झै समान ?पमा हेरेका थिए । सानु चाही उर्लदो बैशमा त्यसरी घरपरीवारको आँखा छलेर समिरसँग लुकीछिपी प्रेम गर्थिन् ।
यता समिर भने निक्कै गरिब परिवारको छोरा थियो । उस्ले भने गरिब कै कारणले उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न सकेन । एस.एल.सी. पास गरेपछी क्याम्पस पढ्ने उस्को रहर सपना जस्तै भयो । घर धान्नको लागि बारम्बार साहुकोमा काम गर्नु पर्थ्यो उस्ले । साथमा बुढी बिधवा आमा र एउटी आधा उमेरकी दिदी मात्र थिए । सानु र समिरको गहिरो माया बसेको थियो । उनीहरू एकअर्का बिना बाँच्न नसक्ने बनि सकेका थिए । उनीहरूको मायामा उच्छृङखल थिएन । साच्चै शुन्दर हरियाली पहाडको कापबाट सङ्लो छङछङ झर्ने झरना झै चोखो प्रेम थियो । समिर सानुको हात उस्का बाबा आमासँग मागेर सामाजिक रितीथिती अनुसार बिवाह गरेर ल्याउँन चाहन्थ्यो । तर बिचरामा गरिबी, दु:ख पिडाको पहाड उस्को छाती माथि थियो । घर जग्गा पनि बाबाको देहान्तमा लागेको खर्चले गर्दा बन्दकी साहुको कब्जामा थियो । उ भौतारीदै कहिले कता कहिले कता कामको खोजीमा हिड्थ्यो ।
सानुको र मेरो घरको अन्तराल भनेको लगभग दुई किलोमिटरको थियो । शनिबारको दिन पारेर कहिलेकाही मलाई भेट्न आउँथिन । उनी मेरो घरमा आउँदा मलाई ज्यादै खुसी लाग्थ्यो र कसैले नसुनी हतपत भन्थे कानेखुसी गर्दै, सानु समिर दादालाई बोलाएर ल्याउँछु है ! सानु मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाएर हुन्छ भन्ने ईशारा गर्थिन । अनि म दौडदै गएर समिर दादालाई बोलाएर ल्याउँथे । त्यसपछी उनिहरू दुईजना मिठा-मिठा कुरा गर्दथे । उनिहरूको कुरा सुनेर म छेउमा मुस्कुराउदै बसेर सुनी रहन्थे । मैले बिर्सेको छैन अझै समिरले सानुको हात समातेर कैयौं पटक कसम खाँदै सानु म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन । तिमी मेरो धड्कन, माया, खुशी, शाहस, आत्मबल, सारा संसार हौ । तिम्रो साथ पाएँ भने म जस्तै परिस्थितीसँग पनि संघर्ष गर्न सक्छु । अनि सानुले भन्थिन म पनि त तिमी बिना बाँच्ने कल्पना गर्न सक्दिन नि समिर । म एउटा जातपात नभएकी अनाथ मान्छे हुँ । मैले आजसम्म म अनाथ हुँ भनेर महशुस गर्न परेको त छैन । आमा, बाबा, भाइ, बहिनीको माया त्यती धेरै पाएकीछु । र पनि कताकता अपूर्ण थिए । तर आज तिमी जस्तो ईमान्दार सज्जन ब्यक्ती प्रेमी पाएर म पूर्ण भएकीछु । र पनि कहिलेकही डर लाग्छ कतै म जातपात थाहा नभएकी भनेर तिम्रो आमा र दिदीले मलाई अस्विकार गर्ने पो हुनकी भनेर । सानुको यस्तो कुरा सुनेर समिर दु:खी हुँदै भन्छ । मायामा जातपात, धर्म, धनी, गरीब केही हुदैन । माया त हृदयबाट आफै स्वस्फुर्त पलाउँने हो । यो सबै हेरेर गरीने त स्वार्थी प्रेम हो । मेरो परिवारसँग सरोकार छैन मलाई सानु, किनकि तिमी मेरो लागि हौ । त्यसैले यो सबै कुरा नसोची निश्चिन्त भएर बस । यस्तै-यस्तै कुराहरू धेरै बेरसम्म गरेर उनिहरू छुट्टिए त्यो दिन ।
एक महिना पछाडिको कुरा हो ईलामबाट निक्कै धनी घरपरीवारबाट बिवाहको लागि सानुको हात माग्न आए । उनी बिवाहको लागि पनि योग्य उमेरकी भएकी थिईन । सानुको बिचार के छ भनी बाबा, आमाले एकान्तमा लगेर सोधे । सानु केटा ईमान्दार अनि राम्रै लेखपढ भएको रहेछ । घरबारमा पनि राम्रै ब्यावस्था भएको रहेछ । यतीका केटासँग तिम्रो राम्रै घरबार हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो तर तिम्रो बिचार के छ भन ! तर सानुले घोसे मुन्टो लाएर पटक्कै बोलिनन । उनि केही नबोलेपछी बिवाहको लागि राजी नै होलिन भनेर उन्लाई बिवाह गरीदिने फैसला गरे । बाबा, आमाको कुरालाई सानुले कहिले काटेकी थिईन । त्यसैले उस्को समिरसँगको प्रेमलाई त्यहाँ खोल्न सकिन । पन्ध्र दिनभित्रमा उनीहरूको बिवाह हुने कुरा पनि पक्का भयो । अब भने सानुलाई पर्नु पर्यो आपत्ति । एकतिर उन्को माया अर्कोतिर बाबा, आमाको ईज्जत के गर्ने अब ।
एकाबिहानै कहिल्यै नआउँने सानु आज किन हस्याङ्फस्याङ् गर्दै बिहानै हाम्रो घर आईन । अनुहारमा नैराश्यता छाएको, रोए झै, नसुते झै देखिन्थ्यो । मैले सानुको यो हाल देख्ने बितिकै उन्को हातमा समातेर सोधी हाले, सानु आज तिमीलाई के भयो ? हात पनि कामी रहेछ ?
सानुले अलिपर मलाई तानेर लादै भनिन मलाई केही भएको छैन कृष्ण । आज समिर घरमा छ की छैन उस्लाई भेट्न जसरी छ मेरो । जाउ त तिमी समिरलाई डाकेर पर खोलाको पुलनेर ल्याएर आउ म त्यहाँ बसी राख्छु है ल कृष्ण । मैले हुन्छ भनी समिरलाई बोलाउँन गए । दादा पनि घरमै हुनुहुदो रहेछ । र हामी दुबै खोलातिर लाग्यौ । समिरलाई देख्ने बितिकै सानु रुन थालिन, अनि उन्ले रुदैरुदै आफ्नो सबै कुरा सुनाईन । सानुका कुरा सुनेर समिर केहि बेर मौन रह्यो, निधारमा चिटचिट पसिना फुट्यो । के गरौ कसो गरौ भयो र उस्ले यही कुरा फैसला गर्यो सानुलाई बिवाह अगाडि नै घरबाट भगाउँने उसँग अरू कुनै उपाय थिएन । सानु पनि समिरको कुरामा मञ्जुर भईन । र हातमा समाएर भनिन मायाको साथ भए ढिडो सिस्नो नै खाए पनि मिठो हुन्छ । माया बिनाको संसार जति रंगीन भए पनि मधुरो नै हुन्छ । समिरले पनि हातमा हात मिलाउँदै भन्यो हो सानु जती सुख सयल भए पनि आफुले चाहेको माया त्यहाँ छैन भने जिवन कहिल्यै सुखी बन्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो बर्षौ देखीको चोखो प्रेमलाई सफल पारौं चाडै नयाँ संसार बसा��"ं यिनै कुराको सर्त अनुसार सानु ढुक्क भएर घर फर्किन ।
बिवाहको लागि सर-सामान, कपडा, गरगहना, दाईजो सबै तयारी भई सक्यो । त्यसैगरी आफ्नो, आफन्त, गाउँमा छरछिमेक ईस्टमित्रहरूमा निमन्त्रणा पत्र पनि बाढिसके । सानुका बा, आमा स-परीवार खुशीछन्‌ । तर सानुको अनुहारमा खुशीयालीको चमक छैन । उनलाई सबैले सम्झाउँछन्‌ । पराई घर जाने बेलामा यस्तै डर, त्रास हुन्छ, नयाँ घर, नयाँ परीवार, नयाँ गाउँ ठाउँ, मलाई पनि तेरो बाबासँग बिवाह हुने बेलामा यस्तै भएको थियो भन्छिन आमा । बहिनीले पनि जिस्काउदै भन्छिन बहाना मात्र हो मेरी प्यारी दिदीको दुईचार दिनपछी मलाई पनि भुल्छिन । जस्ले जे भनेर सान्त्वना दिएपनि सानुलाई भने अत्यन्तै डर त्रास छ । बिवाहको लागि यस्तो तयारी भएपछी समिरसँग हिड्दा भोली बाबा आमाको ईज्वत के होला । त्यस पछी मलाई स्विकार्ने हुन की होईनन । यस्तै कुराको धेरै सोचाईमा उनि पर्छिन । आमा बाबाको ईज्जतलाई हेरेर मैले समिरबाट पाएको माया, जिन्दगीको खुशी, हाँसो सबै उनीहरूको निम्ति बली चढाउँन पनि त सक्दिन । मैले यस्तो कदम उठाए पनि दुईचार महिना रिसको आवेगमा आउलान त्यसपछी मेरो जीवनको खुशीको निम्ति पक्कै मलाई स्विकार्नेछन्‌ । यस्तै यस्तै मनमा सोच्दै बाबालाई एउटा पत्र लेखेर छोडीन र अनि बिवाहको पाँच दिन अगाडि नै सानु समिरसँग घर छाडेर भागिन ।
भोलीपल्ट बिहानै ओछ्यानबाट उठ्ने बितिकै टेबलमा राखिएको पत्र सानुको बाबाले फेला पार्यो । बाहिर सानुको नाम लेखेको हुनाले हतार पत्र खोलेर हेर्नु भयो । पत्रमा लेखीएको थियो ।
बाबा आमा मलाई माफ गर्नु होला हर कर्तब्य र संस्कारको पालना गर्दागर्दै आज म लाचार बनेर तपाईहरूको ईज्जत बचनलाई लत्याएर हिनताबोध गरीरहेकीछु । जुन अवस्थाबाट मलाई उठाएर जीवन दिनु भएको थियो । आज बदलामा बेईज्जतको भागीदार बनाएर हिडेकीछु । यो कुरा तपाईहरूलाई भन्ने धेरै साहश गरे तर भन्न सकिन । किनकी मेरो कुरामा हजुरहरूको सहमत हुदैन थियो । र भन्ने आँट पनि गरिन । जो कोही आमा बाबालाई आफ्नो सन्तानको खुसी र सुखी देख्ने सपना हुन्छ । तर म त्यो सपना देखाउँन सक्दिनथेँ । आज भन्दा चार बर्ष अगाडिबाट मैले उही गरीब घरको छोरो समिरसँग प्रेम गर्दै आएकी थिए । यही मेरो प्रेम सफल पार्न, मेरो माया, खुशी पाउँन आज यो कदम उठाउँन पुगे । भोली आउँने सुनौलो दिनको सपना देखेर समिरसँग नयाँ संसार बसाउन पुगें । लाग्छ यो सबै थाहा पाएर मलाई अवश्य तिरस्कार गर्नु हुन्न । स्विकार्नु हुनेछ आफ्नै सानु सम्झेर, आशिर्वाद पक्कै दिनु हुनेछ ।
उही तपाईहरूको सानु ।
पत्र पढी सकेपछी सबै घरपरीवार छक्क परे । सानुले यस्तो ब्यावहार गर्लिन भनेर कहिल्यै कल्पनासम्म गरेका थिएनन्‌ । बाबा रिसले चुरचुर भएर तुरून्तै ईलाम केटाको घरमा फोन गरे । वहाँले भन्नु भयो हाम्रो यो सम्बन्ध कायम हुन सकेन मलाई माफ गर्नु होला । सानुको अचानक दुर्घटना परी मृत्यु भयो । त्यही आवेगमै आफ्नो कपाल काटेर सानुको कृया समेत बाबाले गरे । र भने आजबाट सानु मेरो लागि मरी अब मेरो सिर्फ दुई सन्तान मात्र छन्‌ । बाटोमा फ्याकेको कस्को नासो मैले पालेर ठुलो भुल गरे भन्दै धेरै दिनसम्म पश्नताप गरी रहे ।
सानु र समिर आफ्नै सुनौलो मायाको संसारमा हराई रहेका थिए । मुहारमा अनेकौ खुशीका किरणहरू झल्किएको थियो । एउटा जिन्दगीको सबै भन्दा ठुलो खेलमा जितको हाँसिल गरेको अनुभव भै रहेथ्यो उनिहरूमा । चखेवाको जोडी झै प्वाँख फिजाएर उडीरहेका थिए ती दुई टिस्टाको तिरैतिर हुदै दार्जिलिङको रमणिय शहर तिर । पहिलो पटक मिठो मायाको अनुभूती, न्याँनो शारिरिक स्पर्श, दुई धड्कनको मिलन त्यो रंगीन शहरको कोलाहलसंगै स्वर्गिय आनन्दमा रमाउँदै थिए । दार्जिलिङको प्रत्येक रमाईला दृष्यहरूको मनोरन्जन लिदै कहिले टाईगर हिल, कहिले गुम्बा, कहिले चर्च, अनि अरू अनेकौ मन्दिरहरूमा सफल प्रेमको सौगात फूलका थुङ्गाहरू चडाउँदै आशिर्वाद लिन्थे । यस्तै क्रम हुदाहुदै त्यहाँ पन्ध्र दिन बिताए र पुन आफ्नो गाउँमा फर्किए । समिरको घरमा त्यस्तो बन्दोबस्त त थिएन तै पनि गाउँघरका छिमेकीहरूलाई निम्ता गरेर साधारण सानुलाई भित्र्याउने र लगन गर्नेसम्म काम भयो ।
सानु सम्पन्न घरमै हुर्किएकी भएपनि ज्यादै कामकाजमा खट्थीन र मेहनती थिईन । दु:खलाई राम्ररी नजिकबाट बुझ्थिन । अब समिरको घरमा त उस्ले खान लाउनको लागि झन संघर्ष गर्नै पर्थ्यो । समिरसँग जहितही मेलापातसंगै जान्थिन । काममा दु:ख भएपनि उनको साथमा चाहेको माया, खुशी थियो । त्यसैले उनी कामले जती थाके पनि आफ्नो प्यारो समिरलाई देखेपछी सारा थकान मेटीएको महसुस गर्थिन । ती दुईको माया देखेर गाउँघरका छरछिमेकीहरू पनि सबै छक्क पर्थे । दु:ख सुख बोनी बुतो गरेर छाक टारे पनि उनिहरूमा एकप्रकारको आनन्दमय जीवन थियो । यसरी हुदाहुदै ६ महिना पनि बिती सकेछ । एकदिनको कुरा हो एक्कासी सानु बिरामी परिन अनि समिरले हतार हतार डक्टर कहाँ लग्यो । डक्टरको जाचपछी खुशीको खबर सुनायो, समिर जी नआतिनु होस खुशीको खबर छ अब तपाई बाबा बन्दै हुनुहुन्छ । समिरले मुस्कुराउदै धन्यवाद डक्टर भन्यो । उता सानु पनि हर्षका आँशु खसाउँदै थिईन । डक्टरले भन्यो बिरामीलाई भने धेरै बिचार गर्नु काम धन्दामा बिल्कुलै नलगाउनु होला । सक्दो उस्लाई आरामका साथ भिटामिन युक्त खानाहरू प्रसस्तै खान दिनु होला । तपाईहरू दुबैलाई बधाई छ यति भनेर डाक्टर कोठाबाट बाहिरियो । समिर खुशीले गदगद भयो र सानुलाई अंगाल्यो र पनि कताकता गरिबीको पिडाले उस्को छाती चसक्क घोच्यो । मनमनै सोच्न लाग्यो सानुलाई आजसम्म माया बाहेक अरू केही दिन सकेको छुईन । अब यो अवस्थामा पनि उस्लाई राम्रो रेखदेख गर्न सकिन भने म पति हुनुको कुनै अर्थ हुदैन । यस्तै अनेकौ सोच्दै समिरले सानुलाई घर पुर्यायो । सक्दो सानुको अगाडि खुशी प्रकट गर्न खोजे पनि समिर दिनहुँ गहिरो सोचाईमा पर्न थाल्यो । उस्ले फेरी पुरानो ऋण माथि थप ऋण पनि लियो सानुलाई लाग्ने खर्चको लागि तर सानुलाई भने यो कुरा सुनाएन । समिर काममा जान्थ्यो साँझमा घर आएर सानुलाई आराम गर्न लाएर हरकाम आफै गर्थ्यो । सात महिना पछी उनीहरूको छोरा जन्मियो ।
मैले पनि घर छाडेर मावला बसेको दुई बर्ष भयो । त्यसैले गाउँघर, बा-आमा, साथी-संगी, छरछिमेकीको याद, सम्झनाले गाउँ जान मन लाग्यो र गाउँमा आएँ । घरमा एकैछिन बा आमासँग कुराकानी गरेपछी म कुदेर समिर दादा र सानुलाई भेट्न भनि गए । सानु कोक्रामा नानी हल्लाउँदै रहिछिन । म बिस्तारै बिरालोको चालमा गएर पछाडीबाट सानुको आँखा छोपी दिए । तर सानुले मेरो हात छोएरै चिनिन आम्मै कृष्ण भन्दै मलाई च्याप्प समातेर धेरै बेर गालामा हातमा चुमी रहिन । अनि एकै सासमा भनिन सन्चै छौ नी हैन ? पढाई कस्तो छ ? किन यतिन्जेल नआएकी तिमीलाई बा, आमा र हाम्रो याद आएन ?
मलाई त आजसम्म दु:ख बिराम केही परेको छैन । पढाई पनि राम्रै छ प्रत्येक बर्ष प्रथम नै भै रहेकोछु । अनि समिर दादा खै त ? छोरा पनि टुकुटुकु हिड्ने बनाउँनु भएछ है ? समिर दादा भन्ने बितिकै सानुको आँखा रसायो । अनि मलाई उनकै छेउमा बसाएर मेरो हात समातेर सुक्सुकाउँदै समिरको बारेमा बताउँन थालिन । साहुले समिरलाई ऋण फिर्ताको बारेमा च्याप्न थाल्यो । की तुरून्तै अब ऋण फिर्ता गर नभए जग्गा मेरो नाम सारी गरी देउ । समिरसँग न त ऋण फिर्ता गर्ने नै पैसा छ न जग्गा नै पास गरी दिन सक्छ, बडो आपती पर्दै गयो समिरलाई । उपाय केही नलागे पछी एकदिन मलाई मुग्लान जाने कुरा सुनायो । गाउँका अरूपनि युवाहरू सिलाङ्, कोईलाखानी, भुटान जाने आउँने गर्थे । समिरले पनि त्यहि जाने निधो गर्यो । म छक्क परे एकोहोरो समिरलाई हेरीरहे । तर केही बोल्न सकिन । बोल्नु पनि के साहुले ऋण फिर्ता मागेर मुटुभरी पिडाको आगो दन्दनी बली रहेको थियो । धेरैबेर पछी मैले भने यो सानो बच्चासँग एक्लै म कसरी बस्नु ? अनि समिरले भन्यो म तिमीलाई खर्चबर्च महिनै पिच्छे पठाई दिनेछु । तिमीले आमा, दिदी र नानीको राम्रो हेरदेख गरेर बस्नु । जुन दिनसम्म म ऋण तिर्ने पैसा पुरा गर्दिन त्यतिन्जेल म फर्किदिन । धेरै भए दुई बर्ष लाग्ला सानु त्यसपछी साथै रमाउँला । के गर्ने तिमीलाई एक्लै छोडेर परदेशीने मेरो रहर हैन यो मेरो बाध्यता हो सानु । यस्तै यस्तै कुराले मलाई सम्झाई बुझाई गरेर समिर मुग्लान जान तयारी भयो । धेरै नरमाईलो लाग्यो मलाई पनि कृष्ण ! समिरको हात समाएर धेरै धेरै रोए आखिर रुनु सिवाय अरु के पो गर्न सक्थे म ! यहाँको लागि चिन्ता नलिनु आमा, दिदी सानो बाबुलाई म राम्ररी सम्हाल्ने छु । बरू आफ्नो राम्रो ख्याल राख्नु, चिठ्ठी पठाई रहनु र चाडै फर्कनु है भनेर अंगालो भरी कसेर समिरलाई बिदा गरेर पठाए । सानुका आँखा बलिद्र आँशुले भरीए । उन्को आँखाको आँशु पुछ्दै भने किन अनि रुनै पर्छ त ? अरु पनि त छन्‌ नी तिमी जस्तै कैयौ बुढा परदेश जानेहरू तर खै उनिहरु रुदैनन त ? अब समिर दादा त आउँने बेला पनि हुनै लागेछ । अनि साहुको ऋण तिरेर आनन्दको सास फेरेर बसौली । अब पत्र पठाउँदा मैले पनि धेरै सोध्या छ भनी दिनु ल । अब म फेरी मावला गएपछी सायद तिन बर्षमा मात्रै फिर्छु होला । हुन्छ कृष्ण अबको पत्रमा धेरै तिम्रो बारेमा लेख्नेछु । अनि तिन बर्षसम्म तिमी न आउँदा बा, आमाको यादले सताउँदैन ? हैन मलाई भेट्न मावलामा वहाहरू नै आफै आउँनु हुन्छ अरे । ल सानु तिमीसँग भेट भएपछी त दिन गएको पतै हुदैन म गए ल भोली बिहानै आउछु । हुन्छ सानु । यसैगरी कहिले साथीसंगीसँग, कहिले दाजु, दिदीहरूसँग, कहिले सानुसँग रमाईलो गरी मेरो एक महिनाको बिदा पनि सकियो । अनि सबैसँग बिदा भएर म मावला तिर लागे ।
समयले फड्को मार्दै गयो समिर मुग्लान गएको पनि दुई बर्ष बित्यो । छोरोपनि टुकुटुकु हिड्ने भयो । घरको लागि समिरले पैसा पत्र बारम्बार पठाई रहन्थ्यो । सानु धेरै खुशी थिईन, जसोतसो दुई बर्ष त बिती गयो । अब त समिर घर फर्कने सुरसारमा होला । पत्र नआएको पनि एक महिना हुन लाग्यो सायद आउँने बेला भएकोले पत्र नलेखेको होला । यस्तै यस्तै सोच्दै सानु समिरको बाटो कुर्न थालिन । सानुलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता ऋणको थियो । त्यो ऋण तिरेर उनी सधै आनन्दको सास फेर्ने आशा गर्दथिन । यसरी दुई बर्षसम्म समिरमा कुनै नराम्रो परिबर्तन आएको थिएन । मुग्लान रहेरपनि घर परिवारको राम्रो हेरदेख गरिरहेथ्यो । तर अनायसै सदा झै समिरबाट पत्रचार र खर्चबर्च पठाउँन बन्द भयो । सानुका आस्था र खुशीका डोरीहरू सबै चुडियो । रातदिन बलिरहने मनमन्दिरमा मायाको दियोहरू झ्याप्प निब्यो । सारा सानुको जीवनमा अनकन्टार कालो ��"शीको रातले छोप्यो । समिर अचम्मगरी बेपता भयो । सानुले उस्को बारेमा कैयौ खोजतलास गरीन । समिर गएको ठाउँमा मान्छे पठाईन । तर त्यहाँबाट घर जान्छु भनेर सबैसँग बिदा लिई हिडेको खबर मात्र लिएर आए । ऊ कहाँ गयो भनेर सानुले कसै गर्दा पनि पत्ता लगाउँन सकिनन । अचानक समिर यसरी बेपता भएको देखेर सानुलाई के सम्म भएन होला । उनी पागल नै भईन । र पनि धैर्यताका साथ आफुलाई सम्हालिन । दुई बर्षको छोरोलाई बुढी आमाको साथमा छोडेर उनी दिनरात अरूकोमा काम गर्न जान्थिन । दिनभरी कामको थकाई, काखमा सानो नानी च्यापेर नाङ्गो गुन्द्रीमाथि पल्टेर अनेकौ मनमा प्रश्नहरू गर्थिन आफैलाई । त्यसैगरी कैयौ रातहरू आँखा नजोडी उज्यालो हुन्थ्यो । र पनि सानुलाई आफ्नो मायाप्रती बिश्वास थियो । पक्कै एकदिन फर्कनेछ समिर भन्थिन, सोच्थिन । समिर बेपता भएपछी सानुले कस्ता कस्ता कुराको सामना गर्नु परेन होला ? त्यस्ता अनेकौ संघर्षसँग युद्ध गर्दै सानुले बर्षौ बिताईन । घरजग्गा पनि साहुको भयो, बुढी आमा पनि बितिन्, दिदी पनि बितिन् । तर समिर फर्केर आएन । छोरोपनि सात बर्षको भयो । सानुले समिरको बारेमा खोजतलास भने गरी नै रह्यो । समिर निस्ठुरीले माया मारे जस्तो सानुले माया मार्न सक्दिनथी । अचानक सात बर्ष पछी समिरले आफ्नो शुन्दर संसार बनाएर सिक्किममा बसेको कुरा सानुले थाहा पाईन । जब यो कुरा थाहा पाएपछी सानु अत्यन्तै रोईन । त्यसरी सायद जिवनमा कहिल्यै पनि रोएकी थिईनन । आफ्नै भाग्यलाई दोष दिदै धेरै धेरै रोईन ।
म मावलामै भए पनि बा, आमाको मुखबाट, दाजु, दिदीको पत्र मार्फत सानुको बारेमा सबै कुरा सुन्थे । ती सबै कुराहरू सुनेर मलाई ज्यादै नरमाईलो लाग्दथ्यो । कहिले एस.एल.सी. दिएर घर जाउँ झै लाग्थ्यो । अनि दुई महिना पछी परिक्षा सकेर घर गए । घर पुगेर खुट्टै नबिसाई सानुलाई नै भेट्न मन लाग्यो र उतै तिर पाईला लम्काए । तर उनी घरमा थिईनन घरको दैलो लागेको थियो त्यसपछी म फर्किए । भरै बेलुकी पख फेरी गए, ढोकैबाट सानु भन्दै कराए उनी चुल्होमा आगो बाल्दै रहिछ । मेरो आवाज सुन्ने बितिकै दौडेर बाहिर आईन अनि च्याप्पै मलाई अंगालेर कृष्ण भन्दै रुन थालिन । मैले उस्लाई नरुन आग्रह गर्दै भित्र लगे । सानु चुल्होमा भात बसाउँदै भन्न लागिन, तिमी मेरो हर दु:ख सुख की साथी हौ । उमेरमा सानो भए पनि भावना, बिचारले म आफु समान तिमीलाई सम्झन्छु । मैले तिमीसँग नरोएर कोसँग रुनु भन कृष्ण ? तिम्रो निष्ठुरी दादा समिरले मलाई बिर्सी हाल्यो । अब रुनु बाहेक अरु के गर्न सक्छु भन त ?
मैले भने सानु रोएर आत्मबल कमजोर नबनाउ तिमी । जब समिरले तिमीलाई बिर्सन सक्छ भने तिमीले पनि भुलीदेउ उस्लाई । माया भनेको दोहोरो हुनुपर्छ । एउटा रथ गुड्नको लागि दुई पाङ्ग्राको आवश्यक हुन्छ । तिमीलाई आजभन्दा दुई बर्ष अघीबाट भन्दै आएकीछु । अब त छोरो पनि सात बर्षको भयो । उस्लाई पनि बाबाको माया चाहिन्छ । साहरा चाहिन्छ । बाबु बिनाको जीवन बच्चाकोलागि अधुरो, अपुरो हुन्छ सानु । तिमीले यो छोराकोलागि अनि आफ्नो जीवनकोलागि सोच । जीवन चलाउँनको लागि जती हामीलाई खानको आवश्यक हुन्छ त्यतीनै बाँच्नको लागि मानिस मात्र नभएर हर पशुपंक्षी, जीव, जन्तुलाई पनि साहराको जरुरी हुन्छ ।
चुल्हामा घोप्टो परेर सानु सुक्सुकाउँदै भन्छे,, कृष्ण म कसरी समिरलाई भुलेर नयाँ जीवन बसाउँन सक्छु । यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । आखिर मेरो भाग्य नै यस्तै खोटो रहेछ । कति अभागी कर्म रहेछ । मेरो बा, आमाले पनि समिरसँग बिवाह गर्नाले मेरो जिउँदै किरिया गरे । यो सबै थाहा थियो उस्लाई, आखिर उस्ले पनि मलाई माया मारेपछी मेरो र छोराको हालत के होला भनेर सम्म सोचेन । उस्ले मलाई जब माया मार्यो मैले के के भोग्नु परेको छैन । यो लोग्नेले छोडेकी यस्लाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्छन । पैसामा मेरो ईज्जत किन्न माग्छन । अस्ति पल्लो गाउँको रामे त मलाई बलत्कार गर्न ओछ्यानमै आएको थियो । त्यो बेला बच्न सफल भए ।
मैले सानुको कुरा बिचैमा काटेर भने, रातको दश पनि बजेछ कुरैकुरामा । अब तीन महिना बस्न आएको म चिन्ता नगर । फेरी भोली साँझ कुरा गर्न आउँछु । तिमीहरू खाना खाएर सुत है ल म गए बाई बाई ।
सानुले पनि हुन्छ भन्दै बिदाको टाउको हल्लाईन ।
म घरमा गएर खाना खाए, बा, आमाले कहाँ गएको थिईस यत्रोबेर भन्नु भयो । मैले सानुकोमा भनेर छोटो उत्तर दिए । बा, आमा खै के के भन्दै गनगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यस्लाई घर आएपछी सानुको घरमै बास हुन्छ भन्दै । ओछ्यानमा सुत्न भनी पसे तर रातै भरी निन्द्रा लागेन सानुको समिरसँगको प्रेम, उस्ले छोडेर गएपछीको सानुले भोग्नु परेका हिंसा, अत्याचार, दु:ख, पिडा यस्तै कुराहरू सोची रहे ' ।
समिरबाट जब टाढा भईन सानु उनलाई बिछोडको पिडामा कहिल्यै कसैबाट सान्त्वनाको राहत पाईनन । दु:खको कुरा त यो छ की नारीले बिवाहित भएपछी बिधवा भएर बस्नु र पतिले छोडेर बस्नु नै हाम्रो समाजको लागि ज्यादै अपच र असैह्य हुने गर्दछ । एक्लो महिलालाई निस्वार्थपूर्ण जिवन चलाएर अघी बढ्न दिदैनन हाम्रो यो समाजले । आज सानु पनि पति बिनाको पिडा, समाजको नकरात्मक दृष्टि, हिंसा र अत्याचार सहेर बाँच्न बाध्यछिन । आफ्नो घर चलाउँन सानो ब्यावसाय होटल गर्छिन सानु । त्यहाँ खान भन्दापनि सानुको जवानी र शुन्दरतालाई फाईदा लुट्न उस्को ईज्जत सौदा गर्न खोज्छन मानिस । कसैसँग हाँस्यो बोल्यो भनेपनि त्यहिसँग लसपस गरी । दुई पैसा कमाईन भने बेश्या काम गरेर पैसा कमाई भन्छन गाउँ समाज । बिचरीले कसरी काट्लीन एक्लै यति लामो जीवन ?
भोलीपल्ट साँझ फेरी गए सानुसँग कुरा गर्न । यसरी नै हर दिन सानुलाई नयाँ जीवन बसाउने सल्लाह दिन्थे । जब मेरो यस्तो कुरा सुनेपछी मलाई भन्थिन । हेर कृष्ण अहिले छोरो अलि सानैछ । कुनै दिन मेरो छोरो पनि त ठुलो हुन्छनी त्यस पछी मेरो हर दु:खमा उस्ले साथ दिनेछ ।
यसपछी सानुको र मेरो लगभग दश बर्ष भेट भएन । म आफ्नो घरजम बसाएर आफ्नै ब्यावहार सम्हाल्न ब्यस्त भए । त्यसपछी घरकै आर्थिक अवस्थाले गर्दा पराईभूमी ईजरायलमा आई पुगे । छुट्टीमा घर जादा पुन आज सानुसँग भेट गर्न मन लाग्यो । बिदेशबाट जाँदाको कोसेली सारी, चोली, पछ्यौरी र केही रकम उन्को हातमा राखी दिए । सानुसँग बोल्नु अघी नै मेरो आँखा रसाई सकेको थियो । उस्लाई धेरै बेर अंगाले । हामी दुबै रोयौ । त्यसपछी मात्र हाम्रो कुराकानी सुरु भयो । मैले भने - सानु हाम्रो भेट नभएको पनि दश बर्ष पो भएछ त छोरो खै त उ पनि अठार बर्षको भयो हैन ? अनि समिरको केही खबरहरू आयो की छैन त ? सानुले भनिन - छोरालाई दु:खको महासागर तारेर हुर्काए तर उही ड्याङको मुलो भने झै कहाँ गतिलो भयो र पढ्न पनि पढेन । पल्लो गाउँको केटी लिएर हिडेको एक बर्ष भो खै कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन पत्र नि पठाएको छैन ? समिरले त मलाई माया मारेकै हो के खबर आउँथ्यो र उस्को त कृष्ण । मैले भने,, सानु तिमीले समिरको त साहरा पाईनौ नै तर न आफन्तकै साहरा पायौ न त छरछिमेकीको नै साहरा पायौ । यो एक्काईसौ सताब्दीमा पनि अचेतनाले, अशिक्षाले आँखामा पट्टी लागेको समाजसँग धैर्यता गर्न, संघर्ष गर्न सक्यौ । कतिपय आत्मबल कम्जोरी हुने महिला त यस्ता समाजसँग हार खाएर आफ्नो जीवन नै अन्त्य गर्छन । तर सानु तिमीले कहिल्यै त्यो कदम उठाएनौ यही नै मलाई गौरब लाग्छ ।
सानुले भनिन - कृष्ण मैले अर्को नयाँ संसार बनाउँने परीकल्पना पनि कहिल्यै गरीन । किनकी मैले समिरलाई सच्चा हृदयबाट प्रेम गरेकी थिए । हर दु:ख सुखमा साथ दिने बाचा गरेकी थिए । उस्ले मेरो बाचा तोडे पनि म तोड्न सक्दिन । म अझै पनि समिरलाई उति नै प्रेम गर्छु जति पहिला गर्थे । आज उसँग साथ छुटेको बिस बर्ष भयो र पनि उस्कै बाटो हेरेकीछु । सच्चा प्रेमको बखान गर्दै महानता दर्शाउँन खोजीन ।
सानु तिम्रो कुराले मलाई निक्कै झोक चल्यो है । फेरी उही कुरा अब नसुनाउ यी सब कुराले म दिक्कछु बर्षौ देखी तिम्रो एउटै कुरा ? आधा उमेर बितेको छैन, भरखर अडतिस बर्ष की त हुदैछौ नी, यो उमेरमा त यस्तो छ बुढेसकालमा के गती हुन्छ । तिमीले नयाँ जीवन बसाउँनै पर्छ सानु ।
बुढा नहुँदा सहनु परेका अत्याचारलाई भुल्यौ ? आजसम्म त्यै आगोमा जली रहेछौ त के ती क्रुर ब्यावहारले तिम्रो मुटु पोलेको छैन, तिम्रो स्वभिमान, ईज्जत जलेको छैन भन सानु ?
तिमी यो पुरानो संस्कारलाई पालना गरेर नयाँयुगको उपहास गर्दैछौ । हामीले अब भनेको नयाँयुगसँग सम्झौता गरेर बाँच्न, हाँस्न, सिक्नु र जान्नु पर्छ । अब आउँने नयाँ पिढीलाई हामीले सिकाउदै लैजानु पर्छ । हेर आज हजारौ तिमी जस्ता नारीहरू निदाएकाछन्‌ । पति नहुँदा भोग्नु परेका कैयौ चोटहरू सहेर बाँच्न बाध्यछन्‌ । तिमी किन आजसम्म निदाई रहेछौ सानु । अब ब्युँझ आफ्नो भन्दा अरुको निम्ति पनी तिमी ब्युँझनु पर्छ । सबैलाई ब्युँझाउनु पर्छ । के तिमीलाई यस्तो कुब्यवहारको अन्त्य गर्न मन छैन ? अब पनि तिमीले एक योग्य पति पाउँन सक्छौ । समिरले तिम्रो मायालाई लत्याएर आफ्नै संसार बनायो । तिमी पनि एउटा छुट्टै संसार बनाउ । सानु तिमी पतिभक्त भएर, सत्यसाबित्री बनेर कहिल्यै तिम्रो जित हुदैन । जब तिमी यो कदम उठाउँनेछौ तब यो समाजको मुख आफै बन्द हुनेछ । यो समाज भनेको हामी नै हौ किनकी हाम्रै हातमा छ सुधार्ने र बिगार्ने भनेको । आफ्नो कर्मलाई कहिल्यै दोष नदेउ यो भनेको समयको खेल हो, समयले नै मानिसलाई हर मोडमा उभ्याई दिन्छ । हामी त्यही समयको दासी हौ, त्यसैले समयसंगै चल्न र खेल्न जान्नु पर्छ, सिक्नु पर्छ । अबका दिनमा आउँने नयाँ पिडीले सानु तिम्रो जस्तो चोखो प्रेमको अनन्त पिडा बोकेर बाँच्नु हुँदैन र नपरोस पनि ।
हल्दिबारी झापा नेपाल